Yakachengeteka Accu-Ropa Glucose Kuongorora Nhevedzano-Sinocare
Mushandisi-ane hushamwari mashandiro system
Kwete kukodha & otomatiki bvunzo tambo ejection
Iyo Yakachengeteka-Accu Ropa Glucose Yekutarisa Sisitimu inosanganisira: Yakachengeteka-Accu yeropa glucose mita, Yakachengeteka-Accu yeropa glucose bvunzo tambo, yeropa glucose gadziriso mhinduro FUNGA ONA: Iyo yeropa glucose gadziriso mhinduro inosarudzika.
Iyo Yakachengeteka-Accu Ropa Glucose Yekutarisa Sisitimu yakagadzirirwa kuyerwa kweuwandu hweglucose mumatsva macapillary eropa rese masampu akatorwa kubva pachigunwe uye mune ine huturu hwakazara weropa. Iyo Ropa Glucose Yekutarisa System ndeyekushandisa kunze kwemuviri chete (in vitro diagnostic use) yekuzviongorora uye kushandiswa kwehunyanzvi semubatsiri mukutungamira kwechirwere cheshuga.
Yakachengeteka Accu yeropa glucose yekuongorora system inoitirwa kushandiswa kwekunze chete uye zvakanyanya kushandiswa mukutarisa glucose yeropa. Iyo yakagadzirirwa kuve iri nyore kushanda, iri nyore uye inongoda chete shoma vhoriyamu yeropa sampuro. Zvese izvi zvakanaka zvinoita iro rakanakisa reropa rekuongorora glucose.
Ropa huwandu 0.6μL
Mhando yemhando Capillary yakazara ropa reropa rose
Calibration Plasma yakaenzana
Kuyera nguva 10 ± 1 masekondi
Mamita ekuchengetedza / mamiriro ekufambisa -20℃~ 55 ℃
divi 96 * 55 * 18 (mm)
Power mabviro 3V DC (CR2032) bhatani sero
Nguva yebasa rebhatiri Tsigira 1000 nguva yekuyedza
ndangariro 200 yeropa glucose bvunzo mhinduro
Mamiriro ekushanda 10 ℃ ~ 35℃; ≤80% RH
Kuyera zvikamu mg / dL kana mmol / L
Kuyera huwandu 20 ~ 600 mg / dL kana 1.1 ～ 33.3mmol / L
Precision: bvunzo mhedzisiro yeSafe-Accu inosangana nezvinodiwa pazasi:
Mamwe mashoko ndapota verenga Yakachengeteka-Accu yeropa glucose bvunzo tambo yekuisa.